Xulashada Nooca saxda ah ee Kala Dambiga - Ellicott dredges
Xulashada Nooca saxda ah ee Kala Dambaynta
Waa maxay cabirka Dredge ee aan u baahan doono?
Adiga oo ah milkiile qadiimi ah, waxaa laga yaabaa inaad aad u xiisayso cabirkiisa inta uu le'eg yahay waxaad u baahan doontaa inaad ku dhammaystirto mashruucaaga. Jawaabtu waxay kuxirantahay dhowr arimood, sida xaaladaha deegaanka iyo faahfaahinta mashruuca. Lahaanshaha fikradda mashruuca ama nooca mashaariicda aad qorsheyneyso inaad dhameystirto ayaa kaa caawin doonta go'aaminta nooca qalabka qalalan in sida ugu wanaagsan buuxiya shuruudahaaga.
Markii la qiimeynayo qulqulka guryaha iyo ka hor iibsashada, qandaraasleyaasha, ururada guryaha, degmooyinka, milkiileyaasha badda, waa inay tixgeliyaan:
Cabbirka maaddooyinka la qallajinayo
Habka qashinka ku habboon
Qoto dheerida iyo fogeynta masaafada aagga qashin-qubka
Heerka wasakhaynta wasakhda iyo waxsoosaarka guud
Dayactirka, kaydinta kaydinta, mushaharka, manfacyada, caymiska, rukhsadaha kala-baxa, iyo qalabyada kale ee ankara marka aan la istcimaalin.
Iyadoo aan loo eegin nooca mashruuca, qoditaanku waa hawl culus oo adag. Dariiqa looga caawin karo yareynta tirada hubin la’aanta hore waa in lala shaqeeyo soo saare sumcad sumcad leh oo daneynaya inuu kaa caawiyo inaad doorato nooca saxda ah ee loo qoondeeyay arjigaaga qashin qubka.
Hopper dredges waa maraakiibta iskaga kaxeeya badda dhexdeeda oo loogu talagalay in lagu ururiyo faaruq iyadoo la adeegsanayo gacmo jiidaya oo ku dhinac socda jiinka hoose ee marin biyoodka. Marka qalabka la soo ururiyo, waxaa lagu keydiyaa gudaha "caloosha" dredge, oo loo yaqaan 'hopper'. Sunta la qabtay ka dib ayaa la daabulaa iyadoo qodku u socdaalayo aagga meelaynta ama qashinka. Labada hab ee ugu caansan ee dheecaanka noocan ah waxaa ka mid ah: 1) Qubidda iyadoo la furayo albaabbada hobaanka ee ku hoos yaal hareeraha; iyo 2) Ku shubista ciidda xeebta iyadoo la isticmaalayo mashiinka dhinac lagu rito ee loo yaqaan 'Hopper dredges' waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa dhismaha jasiiradda, qodidda badaha qoto dheer, codsiyada biyaha furan, iyo dhisidda dekedo waaweyn. Hopper dredges inta badan dhib ayey ku qabaan ka shaqeynta meelaha gacmeedyada, waxaa lagu qodo si ka saxsan noocyada kale ee loo yaqaan 'dredges', waana qaali in la iibsado lana dayactiro.
"McFarland" Hopper dredge - Marinka Koonfur Galbeed ee Mississippi
Ager-ka 'Auger' wuxuu adeegsadaa astaamo qotodheer oo Archimedes ah oo qotodheer leh wuxuuna ku shaqeeyaa iyadoo la adeegsanayo fiilooyin iyo booska wadnaha. Waxaa loo isticmaalaa ka saarida adkaha gaarka ah iyo hagaajinta. Maraakiibta 'Auger' mararka qaarkood waxay ku habboon yihiin hawlgallada aan cidna wadin ee ka socda balliyada iyo balliyada biyaha wasakhda leh halkaas oo marin u helidda dadku ay tahay mid aan loo baahnayn ama khatar ah. Maraakiibtaas waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa marina, soo celinta harada, ama mashaariicda biyaha beeraha. Dhamaan nidaamyada waxaa loogu talagalay ugu badnaan badnaan iyo gaadiid waxaana loo habeyn karaa codsiyo gaar ah. Dedges-ka 'Auger' waxaa sida ugu wanaagsan looga faa'iideysan karaa qoto-dheerka biyaha inta u dhexeysa
4 ft. (1.2 m) iyo 30 ft (9 m). Masaafada ballaaran ee biyaha kuleylku wey yaryihiin dusha sare ee ay kujiraan barkad adag ama adag. Si kastaba ha noqotee, qulqulayaashani waxay wax ku ool u yihiin u isticmaalidda balliyada biraha ah maxaa yeelay waxaa lagu siin karaa giraangiraha waaweyn si ay uga ilaaliyaan in salka hoose uusan u dhicin.
Qulqulaya Bucketwheel waxay u shaqeeyaan sidii jeex jeexjeexe ah oo ku jahaysan qalabka dheecaannada iyo xirxirayaasha, sida caadiga ah isticmaalka kuleylka bajaajta. Qulqulka Bucketwheel waxay ku habboon yihiin isku-dirka macdanta iyo qoditaanka walxaha adag. Dheecaanka baaldiga ayaa si hufan oo sax ah u jaraya, isla markaana u jaraya si isku mid ah dhinac kasta wuxuuna bixiyaa xakameyn qoto dheer oo la fududeeyay. Dhererka Bucketwheel wuxuu lahaan karaa qiime sare oo qaali ah oo iibsasho ah marka loo fiiriyo noocyada kale ee qashinka waxaana inta badan loo dhisay dayactirka qodida hadhuudhka wanaagsan.
Ellicott B590E Bucketwheel Dredge - Kanada
Dillaaca Cilinka Cutter
Qoditaanka nuugista Gooyaha wuxuu adeegsadaa qashin qotomis qotomiye qofeed si uu u debciyo waxyaabaha la qodayo waxaana lagu qeexaa dhexroorka tuubada dheecaanku ka soo baxayo. Cutterhead cutterhead cutterhead wuxuu ku wareegsan yahay qadka qaadashada qalabka wax lagu sawirayo ee bilaashka ah kaasoo dhaqaajin kara qulqulka dareeraha iyo adag ee ka soo baxa dhamaadka nuugida ilaa mashiinka iyadoo la raacayo dhuumaha dheecaanka ilaa goobta qashinka. ama si toos ah xeebta halkaasoo loogu isticmaalo xeebta ama ujeedooyinka dib u soo celinta dhulka. Doomaha waxaa lagu hayaa laba boos oo ku yaal dhinaca dambe ee qarka markii cutterhead uu ku hawlan yahay qodidda. Jarayaashu waxay leeyihiin laba shaqooyin aasaasi ah:
U jeex oo u kala fur qalabka hoose ee marinka biyuhu u marayaan jajabyo yar-yar oo la jaanqaadi kara nidaamka bamgareynta.
Qolka burburka burburay ilaa qulqulka xawaaraha sare ee nuugista qulqulatada halkaas oo agabku markaa lagu matali doono lagana qaadi doono nidaamka tuubbada tubada hawo-mareenka.
Meelaha yar yar ee jarjarka ah ayaa loo kala qaadi karaa qaybo isla markaana si fudud ayaa loo qaadi karaa. Maraakiibtan waxaa dhaqan ahaan loo adeegsadaa ciida iyo quruurux qodista, dib u soo celinta xeebta iyo xeebta, dayactirka marin biyoodka, sii ballaadhinta kanaalka sii ballaadhintiisa, dayactirka dekedda, iyo mashaariicda hagaajinta deegaanka. Meelaha loo yaqaan 'Cutterhead' ee loo yaqaan 'Cutterhead' waxay ku shaqeeyaan si aan kala go 'lahayn, waxay bixiyaan koontarool sax ah, wayna badan yihiin, waxaana loo tixgeliyaa inay yihiin xoogsade warshadeed. Meelaha la jaro ee loo yaqaan 'Cutterhead' waxay leeyihiin xaddidaadyo, ay ka mid tahay dhibaato ku qabashada jajabyada waaweyn iyo ka shaqeynta xaaladaha badda-dheer.
Taxanaha Ellicott 670 Cutter Dragon® Dredge - Guatemala
Waxyaabaha ay tahay in laga fiirsado ka hor intaadan iibsan goosad
Kuwa ka fikiraya iibsashada qashin-qubka waa inay fahmaan:
Haddii aad ku dhimatay wax ka badan lix bilood sanadkii, waxaa macno samayn laheyd inaad iibsato kayd, u tababarto shaqaalaha, oo aad hubiso inaad leedahay qorshooyinka hawlgallada saxda ah ee meesha yaala ka hor intaadan gadan qulqulka.
Way adkaan kartaa in la sii haysto hawl wadeenada qulqulaya sanadka oo dhan haddii aadan shaqeynin sanadka oo dhan.
Dib u eegis ku-dhex-dhexaadka u dhexeeya kharashyada muddada-gaaban iyo maalgashiga muddada-dheer.
Ellicott Dredges, LLC waa hogaamiye caalami ah oo ku jira goynta nuugista maqaarka. Qulqulkayaga waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo deegaanka, lagu wanaajiyo laguna ilaaliyo harooyinka aaminka ah, iyo ilaha miinada ee horumarinta dhaqaalaha. In kabadan 2,000 oo ah noocyada sumadaha ee Ellicott® ayaa la gaarsiiyey in ka badan 100 waddan. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan khadka Ellicott ee la jeexjeexi karo gogo goynta madaxa, wac + 1-410-625-0808, ama ku dhammaystiro khadkayaga internetka xogwaraysiga mashruuca, qofna goor dhow ayuu kula soo xiriiri doonaa.